ငယ်ရွယ်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူကြက်သားဟင်းချို - တစ် ဦး လွယ်ကူသောနှင့်ကျန်းမာပထမ ဦး ဆုံးသင်တန်း
အပေါ် Posted 12.01.2021 12.01.2021
ငယ်ရွယ်သောအဖြူရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်အတူပန်းကန်အရသာရှိပေမယ့်လည်းကျန်းမာကြသည်မဟုတ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သည်ဗီတာမင်များစွာ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ပိုတက်စီယမ်၊ သွပ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံ၊ ဖလိုရိုက်များဖြစ်သည်။
ဒီလိုမြန်ဆန်ပြီးအရသာရှိတဲ့ဟင်းချိုဟာတိုင်းပြည်မှာနေ့လည်စာစားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ မကြာခဏနွေရာသီအားလပ်ရက်တွင်, ရှုပ်ထွေးသောဟင်းလျာများချက်ပြုတ်နှင့်အတူနှောင့်အယှက်အဘယ်သူမျှမရှိ၏။ ကျွန်တော်ဟာရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအရာတစ်ခုခုလိုချင်ပါတယ်။
အားလုံးအရိုအသေအတွက်တစ် ဦး ကအံ့သြဖွယ်ဟင်းချို။ အာဟာရ၊ အဆီနည်းပြီးစုပ်ယူသည်။ ကုထုံးနှင့်အစားအသောက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောလူကြီးများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများ၏မီနူးတွင်၎င်းကိုပိတ်ထားသင့်သည်။ Millet တွင်ထူးခြားသောရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုပါရှိသည်။
ပူပြင်းသည့်ငါးဟင်းချိုသည်အေးဆေးသောနေ့၌သင့်အားအားတက်စေပြီးသင့်ကိုအားတက်စေသည်။ ကျနော်တို့က salmon belly ကနေချက်ပြုတ်ဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်, စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ထွက်လာပေမယ့်အလွန်အရသာရှိတဲ့နှင့်ကျန်းမာ။ ဆော်လမွန်ငါး
နွားနို့ခေါက်ဆွဲကိုဘယ်လိုဟင်းချိုကြမလဲ။ ပထမ ဦး စွာ vermicelli ကိုဆားငန်ရေအနည်းငယ်ဖြင့်ချက်ပြုတ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ချက်ပြုတ်လုနီးပါးဖြစ်သဖြင့်ရေသည်ပြုတ်လုနီးပါး ဖြစ်၍ နို့ကိုလောင်းရသည်။ အနည်းငယ်ဆူအောင်တည်ဆောင်ပါ။
ငါကချဉ်ချက်ပြုတ်မတိုင်မီမုယောစပါးကိုစိမ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? သင်ကအမဲသားဖြင့်ထည့်ပြီးအနည်းငယ်မျှသာချက်ပြုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြုတ်ပါလိမ့်မည်။ အထုပ်ပေါ်ရှိစာရွက်သည်ကောင်းသော်လည်း၊ အတွေ့အကြုံကပုလဲမုယောစပါးကိုဖော်ပြသည်။
အရသာရှိတဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုဘယ်လိုချက်ရမလဲလတ်ဆတ်တဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်ဂေါ်ဖီထုပ်မှဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချို။ သင်အမဲသားကိုချက်ပြုတ်ဖို့လိုတယ်။ အနည်းဆုံးနှစ်နာရီပျော်စရာ။ ကြက်သားဒါမှမဟုတ်အမဲသားဟင်းရည်ထဲမှာဟင်းချိုချက်ပြုတ်တာကပိုကောင်းတယ်။ အာလူး ...
အစစ်အမှန်ရုရှားဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုကိုဘယ်လိုချက်ပြုတ်မလဲ။ ဥရောပနှင့်ဆိုက်ဘေးရီးယားချက်ပြုတ်နည်းများအကြားခြားနားချက်ရှိပါသလား http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html Vasya Utkin ထံမှစာကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ချက်ချင်းပဲကြိုတင်မှာကြားထားမည်။ ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းမချက်ပြုတ်ပါ။
အရသာရှိတဲ့ကြက်သားဟင်းရည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ငါအထက်ပါမှ add ပါလိမ့်မယ်။ ကြမ်းတမ်းသောဆူပွက်ခြင်း၊ သေးငယ်သောမီးလျှံမရှိခြင်းသေချာစေပါ။ မဟုတ်ရင်ဟင်းရည်မိုးအုံ့လိမ့်မည်။ ပြီးတော့အနက်ရောင်ပဲစေ့အနည်းငယ်ထည့်လိုက်သည်။
အေးခဲနေသော mussels များကိုဘယ်လောက်ကျသင့်ပါသလဲ - ၂ - ၃ မိနစ်ကြော်ကြက်ဥများကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောပါ။ ရေခဲများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမာဂျရီသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများထည့်ထားသောအပူပေးထားသောဒယ်အိုးတွင်ထည့်ပါ။
နို့ဟင်းချိုချက်နည်းနည်း ဟင်းချိုများသည်နို့လုံးသို့မဟုတ်နို့နှင့်ရေရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သကြားသို့မဟုတ်သွေ့ခြောက်သောနို့လုံးမပါဘဲနို့ကိုအရည်ပြုလုပ်ထားသောနို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နို့ကိုဟင်းချိုခေါက်ဆွဲနှင့်ချက်ပြုတ်ကြသည်။
အိမ်မှာအရသာရှိတဲ့ငါးဟင်းချိုကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲ။ ရေကိုထည့်ပါ။ အာလူးများကိုကောင်းမွန်သောဆူပွက်အောင်လျှော့ချပြီးဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ အာလူးကဲ့သို့သောစည်သွတ်ငါးများကိုရေတွင်ပြုတ်ပါ။ ကြက်သွန်နီကိုပစ်ချပါ။
ကြက်ဥမရှိဘဲအိမ်လုပ်ခေါက်ဆွဲများကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်းအိမ်လုပ်ခေါက်ဆွဲကိုလောင်းပြီးလျှင် ၁၀၀ ဂရမ်ဂျုံမှုန့်ကိုပန်းကန်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးဆားခတ်တစ်ချက်ထည့်ပါ။ 100 tbsp ။ ဌ။ ဟင်းရွက်ဆီနှင့် 1 tbsp အတွက်သွန်းလောင်း။ ဌ။ ရေပွက်ပွက်ဆူနေသော။
အတွေ့အကြုံရှိအိမ်ရှင်မများအကူအညီ! မုယောနှင့်ကြက်သားဖြင့် pickle မည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။ အသားဟင်းချို (၃၁)၊ ရုရှားအစားအစာ (၃၅)၊ ချဉ် (31) အားလုံး tags မုယောနှင့်မုန့်ညက်။ ဓာတ်ပုံစာရွက် ...
ကြက်သားဟင်းရည်သည်သင့်အတွက်ဘယ်လိုကောင်းပါသလဲ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည်ကြက်သားတွင်းပantibိဇီဝဆေးများနှင့်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်ကိုသာစွဲကိုင်ထားပါကမေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ နိုက်ထရိတ်မှာကော ...
နှင့်ငါးပုံမှန်အတိုင်းငါးဟင်းချိုများအတွက်စာရွက်ရေးသား? သေးငယ်တဲ့ပိုက်ပုံမှန်အတိုင်း, ကြက်သွန်ခေါင်း, ခရမ်းချဉ်သီး 100 ဂရမ်, အာလူး 150 ဂရမ်, ငရုတ်ကောင်း, ဆား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်။ အူများနှင့်အကြေးခွံများမှပိုက်ပုံမှန်အတိုင်းအခြောက်ခံ။ ကောင်းစွာဆေးကြောပါ။
ကြက်သွန်ဟင်းချိုချက်နည်းနည်း ကြက်သွန်နီနှင့်သာကြက်သွန်နီ၏သေးငယ်သောခေါင်းကိုကြိတ်ပြီးနောက်ဟင်းရွက်တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီထည့်ပါ။ အရသာအတွက်ဂျုံမှုန့်၊ ဇွန်း၊ ဆားဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ပါ။ အကယ်၍ …
ကြက်သားချက်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ ကြက်သားကိုချက်ချင်းချက်ပြုတ်သည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးမိနစ် ၂၀ ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ ပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကြက်သားကိုဓားဖြင့်ထိုးပါ။ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီးသွေးထွက်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်းကိုချက်ပြုတ်ထားသည်။ တာကီ ...
ကျွန်တော့်မိသားစုထဲမှာ၊ ချိစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒိန်ခဲကမအောင်မြင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကဝက်အူချောင်းချိစ်နဲ့ကြိုက်တယ်။ ငါစာရွက်ကိုမူရင်းရင်းမြစ်၌ပုံနှိပ်ခဲ့သည်အဖြစ်ကိုးကား - ...
လတ်ဆတ်သောဂေါ်ဖီထုပ်မှဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်း။ Hmm ငါသာမန်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုရှာမတွေ့ဘူး။ အောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများမှဂေါ်ဖီထုပ်ဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်အားတစ်ဆင့်ချင်းပြောပြနိုင်ပါသလား။ လတ်ဆတ်သောဂေါ်ဖီထုပ်၊ အာလူး၊ မုန်လာဥ၊ ကြက်သွန်၊
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,673 စက္ကန့်ကျော် Generate ။